multiboot [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/7851837ff79e55d3821d68a046d3c608.xhtml failed
Fanaovana multiboot Windows - linux
Omanina ny diska dur
Apetraka ny OS tsirairay
Ny bootloader na chargeur de démarrage
Matetika isika efa manana windows mipetraka eo amin’ny solosaina. Dia tiana hasiana linux koa miaraka aminy. OS anankiroa (na maromaro) izany no hapetraka. Ity lahatsoratra ity izany, dia hiresahana ny hoe ahoana no atao raha hanao an’izay.
Azo atao ny mametraka OS anankiroa anaty diska dur samy hafa. Fa mety koa anefa hoe iray ihany ny diska dur. Amin’izay fotoana izay, dia ilaina zarazaraina kiefitreritra izy, izay antsoina hoe partitions. Tsara raha alohan’ny hametrahana ny OS rehetra no anamboarana ny partitions. Avy eo ny partitions tsirairay formater-na amin’ny filesystem mifanaraka amin’izay OS tiana hapetraka aminy. (FAT32 na NTFS ho an’i Windows, ext3 ho an’i Linux)
Kanefa, mety ho efa misy OS mipetraka sy miasa tsara eo. Misy fomba ihany afaka anovana ny firafitry ny partitions, ka tsy ilana mi-formater an’ilay efa mipetraka, ary tsy mahavery ny donnees efa misy. Mampiasa Partition Magic ohatra, na rindrankajy hafa mitovitovy.
Araka izay tiana ny partitions atao, fa ity misy ohatra tsotsotra iray:
hda1                               hda2     hda3
Windows                             Swap     Linux
Ilay hoe hd dia hilazana ny diska dur, a voalohany, ary 1,2,3 ny laharan’ny partition. Ny hda1 izany no avela hisy an’i Windows. Ny hda2 izay 500Mo eo antonony, dia hatao swap ho an’ny linux. Ny swap dia toerana ao amin’ny diska dur izay hanampiana ny RAM raha sendra ka tsy ampy eny am-piasana eny. Ary ny hda3 no hasiana ny linux.
Matetika ny cd fanaovana install linux dia miaraka amin’ny fitaovana fanaovana partitionnement, kanefa tsara raha vitaina mialoha ny partitionnement, fa formatage sisa no atao mandritra ny install.
Rehefa vita ny fanaovana partitions dia apetraka ny OS tsirairay. Eo am-pametrahana an’ilay OS no mi-formater ny partition hasiana azy. Ny tsara dia Windows foana no apetraka voalohany. Raha mbola manana windows maromaro aza, dia apetraka daholo ny windows rehetra. Ny antony dia satria ny bootloader an’i Linux no afaka mandefa windows, fa ny an’i windows tsy mandefa linux.
Raha ohatra moa ka efa ao ny windows, dia efa vita izay, fa miditra amin’ny fametrahana ny linux amin’izay. Ny fametrahana OS moa matetika dia avy amina kapila manjelatra bootable, demarrer-na amin’iny ny solosaina, dia manaraka izay soratra apetrany eo.
Rehefa avy mi-telecharger image cd-n’ny linux moa, dia mila graver-na izy. Jereo eto misy fampisehoana ny dingana tokony hatao amin’ny fi-graver-na azy: fikikisana image cd
Arakaraka an’ilay OS na distribution ny installeur-ny. Ireto misy rohy manome ohatra vitsivitsy:
Windows XP: Jereo eto
RedHat / Fedora : Jereo eto
Ubuntu : Jereo eto
Eo am-panaovana installation (linux), dia atoro azy hoe ny partition hda2 dia swap, ary ny partition hda3 dia formater-na ho ext3, ary ny point de montage dia “/” (tsy misy farango sosona). Omena point de montage koa izy ho an’ilay hda1, ka ataovy hoe: “/mnt/windows” (tsy misy farango sosona)
Hampisafidianany koa ny fonosana (paquets) hapetraka. Efa misy safidy “par défaut” ao, tazony. Fa tsara raha ampiana ao koa, raha mbola tsy ao, ny fitaovana fanaovana developpement rehetra sy ny kernel headers na kernel source. Mety hilaina manko ireny aoriana kely raha hametraka rindrankajy na pilote na ... sns ... Raha manahirana anao eo amin’ny install, dia avelao amin’izao fotsiny aloha. Apetraka amin’ny manaraka izy. :)
Hangatahany password ho an’ny root koa ianao. Tsy azo hadinoina iny password na alahidy iny, fa iny no hahafahana mikirakira azy avy eo. Ho an’ny distribution sasany toy ny Ubuntu dia izay user voalohany eo no sady root. Fa ho an’ny distribution hafa kosa, dia tsy maintsy mamorona kaonty user tsotra iray farafahakeliny. Ny root moa dia ny superuser, ny kaonty root no manana ny alalana rehetra misy eo amin’ilay systeme.
Misy dingana koa ao hangatahany ny config-n’ny hardware-nao. Izay mitovy amin’ny materiel-nao moa no safidianao, fa raha tsy fantatra exactement dia ataovy an’ireto:
souris: generic 3 boutons
clavier: 105 touches fr-latin9
Ecran: raha ecran plat dia izay generic ao, raha ecran CRT dia ataovy an’izay 75Hz ny rafraichissement-ny. Raha tsy mety dia ahidino 60Hz.
Resolution: Matetika ny 15 pouces dia 1024 x 768, fa ny 17 pouces dia 1280 x 1024
Karatra grafika: jereo izay mitovy amin’ny karatra grafikanao. Raha tsy izany dia izay generic ao fotsiny atao.
Ny bootloader dia ilay programa mandray anao rehefa vao mi-boot, ka mampisafidy hoe windows sa linux no tianao halefa. Ny bootloader-n’i Linux no mitantana an’izay, lilo na grub. Rehefa mametraka linux, dia asaivo ataony ao anatin’ny MBR io bootloader io (izay koa moa no par défaut e! tokony tonga dia izay no eo). Tonga moa dia ny installeur nandeha ihany no manao ny config-ny ho azy eo. Mety ho azonao amboarina mandritra ny install ny config-n’ny bootloader, fa mety ho azonao atao aoriany koa. Raha lilo (mandriva, Suse, ...) ilay izy dia ao amin’ny /etc/lilo.conf fa raha grub (fedora, ubuntu, ...) kosa dia ao amin’ny /boot/grub/menu.lst ny fichier hi-configurer-na azy - matetika
Ny ubuntu 5.04 sy ny talohany dia mila fanamboarana ny config-n’ny grub mba hi-boot ny windows. Manokafa terminal (invite de commande), dia soraty eo ity:
sudo gedit /boot/grup/menu.lst
Avy eo, ampiana ao anatin’ny fichier config-ny io ary ireto andalana ireto:
Jereo eto ny fanazavana
Raha vao voalohany ianao no hametraka linux, dia aventure kely io, fa ianaranao zavatra betsaka. Tsy misy zavatra sarotra ao, fa sokafana tsara fotsiny ny maso dia izay. Mazotoa àry :)
Raha misy fanontaniana na fanamarihana, dia ento horesahantsika atsy amin’ny forum
multiboot.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43